Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || उहिलेको तीज, अहिलेको तीज – kayakairan.com
उहिलेको तीज, अहिलेको तीज
मैले सम्झिन थालेपछि तीज मनाइरहेकी छु । राति आमाले उठाएर दर खुवाउनुभएको र हामी ढुसु–ढुसु उँघ्दै दर खाएको अनि बिहान उठ्दा राति दर खाएको थाहा नपाउँदा (निद्रैमा खाएकोले) रोएको कुरा अहिले सम्झेर रोमाञ्चित हुन्छु ।
पछि ठूलो हुँदै गएपछिका तीजहरु झनै रमाइला हुन्थे । तर, अलि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । भोटो कट्टुबाट जामा, प्याण्टमा आइसकेको उमेरले फरक अनुभूति गर्नु स्वाभाविकै थियो । खेतीपातीका काम सकिने र घरगोठका दैनिकीबाहेक अन्य खास काम नहुने, हामी विद्यार्थीलाई लामै विदा हुने र मात्र महिलाहरुको पर्व भएकैले पनि मलाई तीज अझै पनि विशेष लाग्छ । भाउजूहरु माइत जाने, फुपूहरु घरबाट माइत आउने एकप्रकारको यो हाम्रो आफ्नै मौलिक चाड हो तीज ।
हाम्रा प्रत्येक पर्वहरु संस्कृति र धर्मबाट निर्देशित छन् । तीजमा शिवको आराधना गरिन्छ र आफ्नो श्रीमान्मा शिवत्व खोज्छौँ र त्यसैका लागि अनि पतिका दीर्घायुका लागि र अविवाहितले ‘शिवगुणयुक्त’ पति प्राप्तिका लागि ब्रत, पूजा–आराधना गर्ने प्रचलन रहेको यो पर्व गर्व गर्नलायक हाम्रो संस्कृति हो ।
हाम्रोताकाको तीज सबै प्रकारले सात्विक हुन्थ्यो । भोलि ब्रत बस्ने भएपछि ब्रतको अघिल्लो दिन गच्छेअनुसार मिठोमसिनो खाइन्थ्यो । अलि विशेष जातको धानको चामलमा घिउ तरक्क चुहिने गरी पकाएको चाम्रे, खीर, दही, करेला–भिण्डीको अचार, तारेको आलु, अन्य दुई–तीन थोक विशेष तरकारीहरु, कर्कलाको गाँठो पारेर पकाइएको गाभा आदि अनिवार्य हुन्थ्यो । गाभामा निबुवा तरर निचोरेर ‘घिउभात’ सँग खाएको सम्झना ताजै छ ।
दिनभरि गाउँका दिदीबहिनीहरुसँग तीजगीत गाइन्थ्यो, नाचिन्थ्यो । गीत पनि सात्विक हुन्थे । नन्द, अमाजू, देवरानी, जेठानी, सासूले हेपेका, गाली गरेका, खान नदिएका र त्यस्तो हुँदा श्रीमान्ले चुँ पनि नगरेका कुरालाई गीतमा उनेर गाउँथे, विरहका गीत गाउँथे ।
राती कुखुरा नबास्दै दर खाइन्थ्यो। त्यो बेलामा दर भनेकै घिउ हुन्थ्यो । गाउँबेसी, घरखेत, घाँसदाउरा, पानीपँधेरो, घामपानी खपेको शरीरले सजिलै चिल्लो पदार्थहरु पच्थे । भोलिपल्ट निराहार ब्रत । अघिल्लो दिनको आडिलो खानाले ब्रतको दिनमा दर्विलो शक्ति प्रदान गर्ने भएर नै दर भनेको हजुरआमा सुनाउनु हुन्थ्यो ।
यसरी तीजको ब्रत, नाचगान, बेलुकी पूजा–आराधना गरेर तीज सकिन्थ्यो । कहिलेकाहिँ चतुर्थी तिथि टुटेर पञ्चमी पर्दा भने पञ्चमीपूजा नगरी ब्रतभंग गर्नु हुँदैनथ्यो । यो बेलामा अलि गाह्रो हुन्थ्यो । यस्तो बेलामा मिश्रीको काँडा खान दिइन्थ्यो ।
अचेल तीज फेसन भएको छ, राजनीति भएको छ । दलअनुसारका महिलाहरु जम्मा हुने । कि राजनीतिक गीत गाउने कि छाडा गीत गाउने चलन आएको छ । पार्टी प्यालेसमा दिउँसै ‘दर’ खाने चलन आएको छ र साउनदेखि नै दर खाँदै पार्टी प्यालेस चहार्ने क्रम बढ्दो छ ।
ब्रत बस्ने एक हप्ता अगाडिदेखि नै बिटुलो कुरा नखाने हाम्रो गौरवमय धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा हो । तर, अचेल दर खाँदा मासुका परिकार अनिवार्य छ । शहरिया महिलाहरु त“ वियर र वाइन भनेको त रक्सी होइन नि, हल्का पेय पदार्थ हो भनेर दरमा त्यस्ता पेय पदार्थहरुको उपस्थिति गराउने चलन आएको छ भन्ने सुन्छु । यो विकृति हो । यसरी नै हामी आफूले आफैंलाई इसाईकरण गरिरहेका छौं ।
ठीक छ, अहिले हामी महिलाहरु हाम्रा हजुरआमा, आमापालाकाभन्दा बढी पढेलेखेका छौं, चेतना बढेको छ, कमाई पनि छ होला । ब्रत बस्ने र खानेकुरामा समयसापेक्ष परिवर्तन पनि हुन्छ । हुनु पर्छ । ब्रत बस्दा पानी पनि खान नहुने परम्परालाई फलफूलसम्म खान मिल्ने बनाउनु असाध्यै सकारात्मक कुरा हुन् । तर, दरमा मासु खाएर क्रिश्चियनलाई गाली गर्नु घोर अपराध हो । निचता हो । यसलाई आ–आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा ठान्नुहोला दिदीबहिनीहरुले । यो जमानामा ‘लोग्नेको आयु लामो पार्न हामी किन ब्रत बस्ने ? मासु खान किन नपाइने ?’ भन्नुहोला । पाइन्छ । ब्रत नबस्न पनि पाइन्छ । कसैले घोक्रेठ्याक लगाएर तपाईँहरुलाई ‘अनसन’ बस्न लगाउँदैन । तर, तपाईंहरुले आफूलाई हिन्दू सनातनी भन्न नि पाउनुहुन्न । आ–आफ्नो सँस्कृति आ–आफूले नै बचाउने हो । तपाईँहरुलाई यो पढेर रिस उठेको होला । आँखा चिम्म गरेर हाम्रो गौरवमय सँस्कृति सम्झनुस्, शान्त हुनुहुन्छ ।
लौ त सबैमा तीजको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
मचाहिँ हरिदेवी कोइरालाको ‘माइतीघर जाने हो सल्लबल्ल खाने हो’ भन्दै तीज मनाउन माइत गएँ है ।